Ansixinta golaha wasiirada oo dib loo dhigay - BBC News Somali
17 Jannaayo 2015
Image caption Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid
Maanta oo sabti ah waxaa lagu waday in baarlamaanka Soomaaliya la horkeeno golaha wasiirada ee dhowaan uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid.
Balse waxaa soo baxaya warar sheegaya in ra'iisul wasaaraha uu codsaday in 14 maalmood oo dheeraad ah la siiyo si uu isbedel ugu sameeyo golihiisa wasiirada ee uu dhawaan soo magacaabay.
Dad ku dhow gudoonka baarlamaanka ayaa u sheegay BBC-da in gudoomiyaha baarlamaanka la gaarsiiyay warqad ka timid ra'iisal wasaaraha oo uu ku codsanayo maalmahaasi dheeraadka ah, taasi oo la filayao in maantana laga hor akhriyo xildhibaanada.
Illo ku dhow xafiiska Ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale BBC-da u xaqiijiyay in arrintaasi ay jirto sidoo kalena ra'iisul wasaaraha uu doonayo in isbedel uu ku sameeyo xubnaha wasiirada ee uu magacaabay 12 kii bishan.
Dhanka kale, Illo ku dhow madaxweynaha ayaa iyaguna BBC-da u xaqiijiyay in arrintan ay isla og yihiin madaxweynaha iyo ra'iisal wasaaraha.
Baarlamaanka ayaa la filaayaa in codsiga ra'iisul wasaaraha uu aqbalo, si isbedelka la sheegay loo sameeyo.
Mudanayaasha baarlamaanka ayaa horey u codsaday in ra'iisul wasaaraha uu wasiiradiisa maanta horkeeno si ay u siiyaan ama ugu diidaan codka kalsoonida.
Golaha wasiirada ee uu magacaabay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, ayaa waxaa u badan wasiiradii xukuummaddii hore, taas oo dhaliil loogu jeediyay, in kastoo uu difaacay markii Ra'iisul wasaaraha uu ku dhawaaqayay wasiiradiisa.